पावलले रबिन्सन: को अंग्रेजी गोल रक्षक को कथा
पावलले रबिन्सन - फुटबल "Burnley" अंग्रेजी पछिल्लो मा, प्रिमियर लिग प्ले क्लब - इङ्गल्याण्ड को राष्ट्रिय टीम को गोल रक्षक। रबिन्सन - फुटबल को एक अनुभवी। व्यावसायिक क्यारियर उहाँले 1998 मा शुरू भयो, र "Burnley" आफ्नो क्यारियर को क्लब बस चौथो खेलाडी भए।
16 वर्ष मा पावलले रबिन्सन को युवा टोली थियो, "लीड्स", र दुई वर्ष पछि उहाँले आफ्नो debut गरे र "मयुर" को थोक लागि। तर, शताब्दीको सुरुमा एक अभूतपूर्व वृद्धि अनुभव कि टीम को मुख्य गोल रक्षक, पावलले त बन्न र असफल भयो। को छ वर्ष मा उहाँले ज्यादातर मुख्य गार्ड गेट आराम दिन क्षेत्र छोडेर 95 झगडे बिताए। यो अवस्था त्यो अर्को क्लब स्थानान्तरण गर्न सहमत मा 2004 त्यसैले, जवान र घमन्डी खेलाडी संग पनि खुसी छैन।
नयाँ क्लब 25 वर्षीया गोल रक्षक लन्डन प्लेयर 1.5 मिलियन पाउण्ड लागि सम्झौता किनेको "Tottenham", भएको छ। पावलले रबिन्सन द्रुत "Spurs" अमेरिकी अनुभवी Keysi Kellera र अर्को तीन वर्ष को आधार बाहिर चलाए एक undisputed नम्बर भएको छ। जब सफल त्रुटि को एक नम्बर गरे Englishman को दिल मा ठाँउ, केवल 2007-2008 सिजन मा गुमाए। रबिन्सन दृढ Radek Cerny र 2008 को गर्मी पछि पीठ मा स्थापित एक नयाँ टोली खोज्न थाले।
यो, कि लागि प्ले "Tottenham," एक गोल रक्षक रूपमा, तर पनि गणक रूपमा मात्र होइन पावलले रबिन्सन थियो विचारणीय छ। मार्च 2007 मा, प्रिमियर लिगका घर मिलान मा गोल रक्षक गेट, पागल शट "Watford" 75 मीटर देखि मारे। सोही, यो गोल रक्षक सम्पत्तिमा दोस्रो लक्ष्य थियो। "SWINDON टाउन" एक Duel मा - पहिलो, उहाँले "लीड्स" सम्म chalked।
उहाँले एक खेलाडी, हुँदा "Spurs" पावलले निरन्तर इङ्गल्याण्ड गर्न बोलाए र चयन र मुख्य गोल रक्षक को स्थिति मा 2006 विश्व कप को अन्तिम बिताए। रबिन्सन पनि यूरो 2008 को क्वालिफाइङ राउन्ड मा भाग, तर Euroforum टीम जवान र होनहार हार्ट र ग्रीन, साथै अनुभवी दाऊदले जेम्स गए।
पावलले रबिन्सन - एक भद्र "ब्ल्याकबर्न" को भाग रूपमा 2008-2009 सिजन लागि घोषणा खेलाडीहरू बीच छ, को पाठ्यक्रम, म एक तारकीय रुकी उभिए। गोल रक्षक, "Tottenham" मा पहिले रूपमा, अंग्रेजी फुटबल को अर्को अनुभवी, अमेरिकी प्रतिस्थापित छ ब्राड Friedel।
इङ्गल्याण्ड को पूर्व-गोल रक्षक को राम्रो प्रदर्शन बाबजुद (राष्ट्रिय टोली लागि रबिन्सन 44 मिलान खर्च), "ब्ल्याकबर्न" को प्रिमियर लिग मा एक foothold बढाउनका व्यवस्थित छैन र च्याम्पियनशिप मा घट्यो। समय, पल अंग्रेजी फुटबल को कुलीन फर्कन धेरै विकल्प थियो, तर उहाँले वर्तमान टोलीसँग त मात्र गर्न छनौट गरे। तर, यी materialize थिएन योजना - कारण चोट रबिन्सन गर्न 2013 मा लगभग सम्पूर्ण क्यालेन्डर छुटेका र क्षेत्र फर्के, उमेर गोल रक्षक आधार मा आफ्नो स्थान गुमाए। आपसी सहमति गरेर सिजन 2014-2015 फुटबल खेलाडी को अन्त र क्लब मा सम्झौता नवीकरण छैन।
"मर" द्वारा पावलले रबिन्सन निःशुल्क स्थानान्तरण मा 2016 को सुरुमा साथ दिए। त्यसै वर्ष को गर्मी मा, "Burnley" को व्यवस्थापन अंग्रेजी नयाँ वर्ष सम्झौता भेटेरान प्रस्ताव राखे। रबिन्सन जगेडा गोल रक्षक रूपमा सेवा गर्दैछन् (एक खेलमा प्ले सबै समय को लागि), यो 2016-2017 सिजन महत फुटबल खेलाडी को अन्त मा आफ्नो खेल क्यारियर समाप्त कि अपेक्षा गरिएको छ।
अलेक्जेन्डर Sheshukov: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
Ghanaian मिडफिल्डर ईम्यानुएल Frimpong
रूसी defenseman Karavaev Vyacheslav
दिग्गज बेलारूसी फुटबल खेलाडी Aleksandr Gleb
पंजाशर गज, अफगानिस्तान: भूगोल, सामरिक महत्व
जर्मनी मा आकर्षक किनमेल
र बेफाइदा: मा Wisniewski Liniment balsamic
Rochefort - तालिका अङ्गुर। वर्णन, cuttings द्वारा प्रसार
के र हटाउन कसरी: भाइरस को EXE-फाइलहरू मेटाउँछ वा कार्यक्रम पहुँच ब्लक
Ergo झोला "Guslenok": तस्बिर समीक्षा
Maksvell Dzhon र नेतृत्व मा आफ्नो पुस्तक
IPhone गर्न पर्याप्त भण्डारण: यो के मतलब र के गर्न?
वर्ग प्रधान विचार हुक: रेखाचित्र बुनाई विवरण
एन्डोक्राइनोलजस्ट: के गर्छ र के व्यवहार?
केप वर्डे या केप वर्डे
इन्टरनेटबाट एउटा चलचित्र कसरी डाउनलोड गर्ने? डाउनलोड गर्न एक कार्यक्रम भिडियो, संगीत र चलचित्र